တောင်ပေါ်သား: T နဲ့ တောင် ~~~ တောင် နဲ့ T
T နဲ့ တောင် ~~~ တောင် နဲ့ T
ကဲ မောင်ဆောင်ချမ်းမိုး Tagတဲ့ ဘာမသိ ညာမသိ တက်စ့်ပို့ပါ။
1. What is your name : တောင်ပေါ်သား (ဘူတူလဲ)
2. A four Letter Word : တစ်တီတူးငှက် (သိကြလား)
3. A boy's Name : တာတီး (ရွာက နာမည်လေ)
4. A girl's Name : တာတေမ (ဘယ်သူလဲ သိပါတယ်)
5. An occupation : တောက်တိုမယ်ရ (တကယ်ပြောတာ အကုန်လုပ်တယ် မယုံလာကြည့်)
6. A color : တောက်တောက်ရဲရဲ (ရဲရဲတောက် တို့ဗမာတွေ)
7. Something you'll wear : တီရှပ် (စပို့စ်ရှပ်လဲ ပါတယ်ဝေး)
8. A food : တီကောင်ပြုပ် (စားမှာလား)
9. Something found in the bathroom : တန်းလန်းကြီး (ဒုတ်တန်းကို ပြောပါတယ်)
10. A place : တောင်ကြီး (ခက်မှခက်ပဲ)
11. A reason for being late : တောက်တဲ့တကောင် သောင်းကျန်း၍ ညမအိပ်ရလို့း)
12. Something you'd shout : တောက် (မကျေနပ်မှလုပ်ပါတယ်)
13. A movie title : တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွတ်သူ (တကယ်ရှိမရှိ မသိဘူး ရေးချင်တာရေးပဲ အဟေးး)
14. Something you drink : တောက်တီတောက်တဲ့ (ဘာမှန်းကို မသိတဲ့ အရည်တွေ)
15. A musical group : တွံတေးသိန်းတန် (ပန်းရယ်မင်းရယ် ပိတောက်ရယ် :P)
16. An animal : တောင်ဆိတ် (မေးစေ့မှာ အမွေးတွေနဲ့)
17. A street name : တောင်ချွန်းလမ်း (တောင်ကြီးမှာ တကယ်ရှိပါတယ်)
18. A type of car : တောင်ဒဂုံ စက်မူဇုံထုတ် ဂျစ်ကား (ဖွားကီအဖေကားတွေလို ဂျစ်တီးဂျစ်ကန်လုပ်လို့ ပြောတာနေမယ်)
19. The title ofasong : တောင်တန်းတွေကိုလွမ်း (ဒါလဲ ရှိမရှိမသိဘူး စာသားတော့ ရှိတာပဲ)
20. A verb : တွေး ( တွေးလေ တွေးလေ ပျောက်ဆုံးလေပဲ)
Below is the Tag Post from Mg ThanLwin Hero :P
1. What is your name : Taung Paw Tar
2. A four Letter Word : Town
3. A boy's Name : Tommy
4. A girl's Name : Tacy
5. An occupation : TTMY (tauk to me`ya)
6. A color : Turquoise
8. A food : Traditional food
9. Something found in the bathroom : Toothbrush
10. A place : Taunggyi
11. A reason for being late : Time is wrong
12. Something you'd shout : Take care yourself
13. A movie title : To Live
14. Something you drink : Tiger :P
15. A musical group : The Doobie Brothers
16. An animal : Tarantula
17. A street name : Thanlwin Road
18. A type of car : Thunderbird Car
19. The title ofasong : Take Me To You Heart
20. A verb : Take it upon yourself
Rules : It's harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers ,enter yours.Use the first letter of your name to answer each of the following questions.If the person before you had the same first initial , you must use different answers.You cannot use any word twice and you can't use your name for the boy/girl name question. ( Copy from Mg Thanlwin Hero :P)
ခုတလော ဘလော့တွေမလည်နဲ့ လည်လိုက်ရင် ဒါတွေပဲ တွေ့နေရတယ်။ ဘယ်သူ့အစလုပ်လိုက်တာလဲ မသိပါဘူး နောက်တခါ ဘာတွေလာဦးမလဲ မသိဘူး တော်တော်တော့ ကြံဖန်လုပ်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေပဲလား မသိတော့ပါဘူး။ ကျနော်ပါ ရူးပေါပေါလုပ်သွားတယ် အဟေးဟေးးးးးးးးးးးး
Posted by တောင်ပေါ်သား at 11:09 AM | Labels: Tag ပိုစ့်လေး
ယုံတယ် ယုံတယ် တောက်တိုမယ်ရ အကုန်လုပ်တယ်ဆိုတာ
(အဲဒီလူ မြင်ဖူးဒယ်မှတ်နေတာ လက်စသတ်တော့ တောင်ပေါ်သားကိုးးးးးးးးးးးး)
တဖော် ကိုတောင် ကြီး
ရ ဖော် ရယ်သွားတယ်
သ ဖော် သဘောတော့ကျသား
လ ဖော် လွမ်းနေသား (တောင်ပြာတန်းက
င ဖော် ငါးစားလျက် (တီကောင်ပြုတ်တော့ကြိုက်ဝူး)
တောင် ဆိုတာမြင်တော့ မျက်စိထဲ အမျိုးမျိုးမြင်မိတယ်...
တောတွေ တောင်တွေ မြင်မိသလို....
ဥပမာ စပါးတောင်လိုပုံ ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးပေါ့လေ....
တောင်နိုင်ပါစေ (အဲလေ) စကားကလဲနော်
တွဲစားတာပဲ ဖြစ်ရမယ် .. :P
တောင်ကြီးက တီရှပ်နဲ့လျှောင်ကီးရယ် ... တနားချာလေး .. တီကောင်ပြုတ်တွေ တုတ်နေရတာ ..တန်းလန်းကြီးဆိုတဲ့တောင်ဆိတ်လေးက တာတီး ယူတွား လို့လား . တောက်တီးတောက်တဲ့တွေ ။
တာတီး ကိုတောင်ပေါ်ကို တောက်တိုမယ်ရအလုပ် အတွက် လစာ အနေနဲ့တောက်တောက်ရဲရဲ တီရှပ်တထည်နဲ့ တီကောင်သုပ် ရှယ်လုပ်ကျွေးမယ်... :P
တီကောင် တော်တော်ကြိုက် .... စားလို့ ကိုမပြီးတော့ဘူး..... :D
တောင်ကြီးက တောင်ချွန်းလမ်းမှာ တောက်တိုမရ လုပ်တဲ့ တီရှပ်အစုတ်လေးနဲ့ တောင်ပေါ်သား တောက်တဲ့တကောင် သောင်းကျန်းလို့ဆိုပြီး တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ တောင်ဒဂုံက ဂျစ်ကားကို ကိုတွံတေးတိန်းတန် သီချင်းညီးရင်းပြင်နေတုန်း တောင်ဆိတ်ဝှေ့သွားတာ တီကောင်ပြုတ် စာတုန်း တန်းလန်းကြီးလေ။
ဟိဟိ ၃ ၇က်ခန့်ထားပါမည်
တာတီး တာတေမ တို့ တောင် အရွယ်ရောက်လာပြီးနော်။ ဟိုနေ့ ကတောင် တောင်ချွန်းလမ်းမှာ တွေ့ မိပါတယ်။ တောက်တီး တောက်တဲ့တွေလုပ်လို့:)
ဘယ်သူလဲဆိုတာ မပြောဘူး အသေသတ် :))))))))))
တောက်တီး တောက်တဲ့ အရည်တွေ သောက်တယ်.. အံ့ရောပဲ..
“တူးတူး”တို့ တောက်တီတောက်တဲ့ တောင်တက်တော့.. တောက်တဲ့တွေ တစ်တီတူးတွေ တွေ့တယ်တဲ့တော့်
တောက်တီးတောက်တဲ့ အရည်ဆိုတော့ ရေဂဲတုံးတွေ ပါလို့ပေါ့နော်..... ကတောက်ကတောက်နဲ့မြည်နေတာပေ့ါ... :P
ဒီတဂ်ကိုဖတ်ရသမျှထဲမှာ ဒီတစ်ပုဒ်အပေါဆုံးပဲ.... :P
တီဖော်တောင် ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့ :D
တတတတတ တော်တီး၂ တော် :P
အယ်လဲ့ ဝေါဟာရကလဲ တယ်ကြွယ်ပါလား ကိုတောင်ပေါ်သားရယ် ညီမမှာဖြင့် စဥ်းစားလိုက်ရတာ သူကဖြင့် ၂ ထုတောင် ရေးပေးသွားတယ် ဟွင်းးးးးးး
ဘိုင် ပြန်မယ် တာ့တာ
တော်တော့ !!! :D
အတက်ခံထားရတာပဲလား....။ ကျနော်လဲ ရေးရဦးမယ်ဗျာ..။
တောင်ပေါ်တစ်ယောက်တော့ ရိုးပါ့... တောက်တိုမယ်ရအလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်လို့... ထမင်းချက်ချိန်မရတော့ တီကောင်ပြုပ်လေးနဲ့...
တောင်ဆိတ်က တီကောင်ပြုပ်လေးကို စားသွားလေရော...
ညီရေ တောင် For T ကို လာဖတ်သွားတယ် နော်
တက်ဂ်ပို့စ်လေးကို ရေးထားတာ လာဖတ်သွားတယ်
ကြုံ၇င် အဲဒီ ကိုယ်ရယ် မင်းရယ် ပန်းပိတောက်ရယ် သီချင်း ဆိုပြဖို့ လာတောင်းဆိုပါတယ် :)
T နဲ့တောင်တဲ့ တောင်ပေါ်သားရေ... ဖတ်ရတာ အထိတ်တလန့်နဲ့။ စလာတည်းက T နဲ့ တောင်ထားတော့။ အင်း...ဟင်း..ဟင်း လို့ပဲ သက်ပြင်းချလိုက်ရတယ်။ :D
စ ဖော် စိုး ရေးထားတာ မဟုတ်ဘူးလား
တ ဖော် တောင်ပေါ်မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါရဲ့
စ ဖော် စိုး ရေးရမှာလေ..